हिटलरको कट्टु जसको मुल्य किन यति धेरै भयो ? - ज्ञानविज्ञान
हिटलरको कट्टु जसको मुल्य किन यति धेरै भयो ?
Video विचित्र संसार | December 1, 2017 | mygyanbigyan
मान्छेले लाउने कट्टुको मुल्य कति हो वा कति पर्न सक्छ भनेर सोध्ने प्रश्नानै हैन ।कसैले प्रयोग गरेर फ्याँकेको कट्टुको मूल्य कति होला ? वास्तवमा यो कुनै सोध्ने प्रश्न नै होइन, किनकि त्यस्तो मूल्यहीन वस्तु रद्दीका लागि मात्र योग्य हुन्छ ।
तर जर्मनीका चर्चित तानाशाह हिटलरले प्रयोग गरेको कट्टु भने झन्डै ६० हजार रुपैयाँमा बिक्री भएको छ । अमेरिकामा भएको एक लिलामीका क्रममा हिटलरको कट्टु ५५ सय अमेरिकी डलरमा लिलाम भएको हो ।
सेतो पाटे नाइलनको कट्टु निकै ठूलो आकारको थियो, १९ इन्च लामो । साथै यसको कम्मरको साइज ३९ थियो भने दायाँ माथिपट्टि हिटलरको नाम जनाउन ए एच लेखिएको थियो । अष्ट्रियाको ग्राजस्थित पार्कहोटलमा हिटलरले उक्त कट्टु छाडेका थिए ।
उक्त होटलमा हिटलर सन् १९३८ मा बसेका थिए । उक्त होटलका तत्कालीन मालिकका नातिले लेखेको पत्र अनुसार उक्त होटलमा हिटलर सन् १९३८ को अप्रिल ३ र ४ तारेख बास बसेका थिए । त्यसक्रममा उनले आफू बसेको कोठामा आफ्नो एउटा कट्टु छाडेर गए । सोही कट्टु अहिले अमेरिकाको अलेक्जेन्डर हिस्टोरिकल अक्सन हाउसले ५ हजार ५ सय डलरमा लिलाम गरेको हो ।
Previous Postअन्तरिक्षमा लाश जलाउँने तरिका यस्तो छ, रुसले थाल्यो व्यवसायNext Postबिहेमा ३२ मिटरको साडी लगाएर किर्तिमान राख्न खोज्दा हुने भयो १० बर्षको जेल